ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန် ပြောဆို | Freedom News Group
by FNG on September 30, 2012	ဘီဘီစီHardTalk တွင် နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတ အဖြစ်
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယေးလ် တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း မြန်မာ ဘာ ပြန် အပြည့် အစုံ
ကိုလံဘီယာ – အီကွေဒေါ နယ်စပ် တွင် ပြန်ပေးဆွဲခံရ သည့် ဗြိတိန်သူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံသူ နှစ် ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ →
ကောင်းလိုက်တာ ပါ တကယ်ဘဲ
ပြည်သူ ပြည်သားတွေ အခြေခံ ဥပဒေကို သေချာနားလည်ထားဖို. လိုပါတယ်…
နားလည်အောင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ.အစည်းများက ပညာပေးစေလိုပါတယ်…
အမေစု သမ္မတဖြစ်လာဖို. ဆိုတာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပါ
ပြည်သူတွေ ကတော. ရာနှုန်းပြည်. နီးပါး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အားပေး ထောက်ခံကြတယ် ဆိုတာ
အခြေအနေမှန်ကို နားလည်လက်ခံကြသူတိုင်း သိကြမှာပါ…
October 5, 2012	Tin Myint Oo	#
လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတကိုပြည်သူက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ အမေစုကိုလည်း သမ္မတမဖြစ်အောင်
October 5, 2012	့honey	#
September 30, 2012	Wah Wah Lwin	#
အမှန်အကန်ဆိုရင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိပါ…ပြည်သူတွေကို စည်းရုံးချင်ရုံ သက်သက်ပြောတာတော့မဖြစ်စေချင်ပါ…မီဒီယာတွေကို မိမိသတင်းမိမိ တာဝန်ယူရဲရမယ်ဆိုသလို…သမတကြီးလဲ မိမိနှုတ်ကထွက်တဲ့စကား မိမိတာဝန်ယူရဲဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်…
September 30, 2012	Lovely September	#
သမ္မတကြီး တကယ်ပြောတာ ဆိုရင်လေးစားပါတယ် ၊အခြေခံ ဥပဒေမူကိုပြင်ရပါမယ် ။ပြည့်သူ့ဆန္ဒ ကိုတကယ်လေးစား တန်ဘိုးထားကြောင်း သက်သေပြပါ ။ ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ချက်ရှိ အောင် သမ္မတ လုပ်ပြပါ…။
September 30, 2012	Kaung Naing	#
လျှောက်ပြောနေတာ။ လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတကိုပြည်သူက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ အမေစုကိုလည်း သမ္မတမဖြစ်အောင်
ပြည်သူ့ဆန္ဒဆိုရင် မြန်မာပြည်သူ ၈၀%က အမေစုကို ထောက်ခံပြီးသား။
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,510,595 hits